M/weyne Faroole oo ka hadlay xilliga kala guurka ah, saamaynta ururka Al-shabaab ee Puntland iyo kaalinta Amisom. – Radio Daljir
Juunyo 4, 2011 12:00 b 0
Kambala, June, 04 – M/weynaha dawladda Puntland C/raxmaan Max?ed faroole oo ka qaybgalay shirkii kooxda xiriirka caalamiga ah ee lagu soo gabagabeeyey Kambaalaya shalay galab ayaa sheegay in tahay in la qabto doorasho ka hor bisha Aug. ee sanadkan ayna tahay taasi sida ugu fudud ee xal lagu gaari karo.
Waxa uu mar sii horreysay u sheegay saxaafadda in haba yaraatee aysan madaxda dawladda federalku waxba ka qaban shaqadii loo igmaday, wakhti loogu daraana uu yahay gacmo daalis. Waxaa uu soo dhaweeyey kaalinta Amisom ee dalka Somaliya iyo baahida loo qabo in si siman loo eego xaaladda ammaan ee dalka Somaliya.
Dr. Faroole oo khudbad dheer jeediyey waxa uu sheegay in Puntland uu fara kulul ku hayo ururka Al-shabaab oo uu sheegay inay hadda ku jiraan dhulka buuraleyda ah ee gobolka Bari, ayna tahay in laga kaalmeeyo sidii looga hortagi lahaa.
M/weyne Faroole ayaa si fog uga fallooday arrimaha Puntland waxaana ka mid ahaa qodabada uu taabtay arrinta bur-cad badeedda oo dawladdu dagaal dheer kula jirto.